Izindaba - Abakhiqizi be-Precision casting bachaza inqubo ye-silica sol casting ngokuningiliziwe!
Inqubo yamanje yokufaka imali yokutshala imali ikhula ngokushesha, futhi iyathandwa ngenxa yokubukeka kwayo okuhle nokuhlanzekile. Ngokusho mkhuba wamanje, izingxenye izingxenye ekhiqizwa ngokunemba thusi esikhathini esizayo ziyoba ngokwengeziwe ezinkulu. Ubuchwepheshe bendabuko obungenalutho manje bungaphansi kokuthuthukiswa kwemakethe, buqedwa kancane kancane. Kulezi zinsuku, izidingo zekhwalithi nezidingo zenqubo yemikhiqizo yokusakazwa emakethe ziya ngokuya zanda, amandla ezobuchwepheshe adingekayo nawo aya ngokuya enyuka, futhi isidingo sokusebenzisana kochwepheshe sizoba ngaphezulu kuphela.
Okwabakhiqizi bokunemba ngokunemba, inqubo yamanje edumile kufanele ibe yenqubo yokusakaza ye-silica sol. Ngabe iyini inqubo yale nqubo? Inqubo eyisisekelo imi kanje:
Ukwenza ukusakaza, abakhiqizi bokunemba ngokunemba kufanele baqale benze isikhunta. Ngaphambi kokusebenzisa izinqubo ezithile, abakhiqizi bazoklama futhi bakhe ama-prototypes ngokuya ngemidwebo enikezwe umsebenzisi, bese benza isikhunta ngokuya ngemidwebo.
Ncibilikisa i-wax yokubumba ibe yisimo soketshezi, bese uyithela kudivayisi yokulondoloza ukushisa. Masime ukususa amanzi nokungcola okusele, bese ufaka i-wax entsha kuze kube ivolumu ngaphakathi ihlangabezana nezidingo zesikhunta esifunayo, bese uthela i-wax esikhunjeni sangaphambilini, ulinde ukuthi i-wax ipholile futhi iqinise, bese uyayikhipha . Yenza ukusika ukuze ubone ukuthi kuyahlangabezana yini nezinga. Uma ingahlangabezani nezinga, izothathwa njengomkhiqizo odoti, bese igxathu lokuxhuma lizoqala futhi.
3. Ukwenza igobolondo
Dlulisa uhlobo lwe-wax oluhlangabezana nezidingo ngokusebenzisa i-slurry engaphezulu kwesendlalelo, ukomisa, ukubeka uphawu bese uyomisa.
Igobolondo elilungiswe esinyathelweni esedlule liyosiwa futhi lingahlukaniswa libe izingxenye ezimbili: isixazululo esiqinile nesembozo sebhakede sokuthela. Ngemuva kokuthi lezi zingxenye ezimbili seziphothuliwe, igobolondo liyapholiswa futhi lisuswe, bese liphakanyiswa lisikwe ngaphambi kokubuyela esithandweni somlilo.
5. Hlanza uphinde ulungise
Faka okokusebenza kwensimbi ku-hydrofluoric acid bese uyicwilisa, bese udlula ezinyathelweni ze-sandblasting, ukususwa okuyisisekelo nokudubula ukuqhuma, bese wenza ukuhlolwa kwesibili. Uma kunomkhiqizo odoti, isinyathelo sokuthululela siyaphindwa.